Maanta oo ku beegan maalinta caalamiga ee curyaamiinta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mahdi Deer ayaa ka shaqeeya saxaafad soomaaliyeed oo ka hawlgasha magaalada Trollhättan. sawir: Mona Ismail/SR
Maanta oo ku beegan maalinta caalamiga ee curyaamiinta
La daabacay måndag 3 december 2018 kl 14.53
Isniinta maanta oo bishu tahay 3-da diseembar ayaa ku beegan maalinta caalamiga ee dadyoowga iimaha leh, waxa afka soomaaliga loogu yeero curyaannada.
Ururka caalamiga ee Qarammada Midoobey (QM) ayaa sannadkii 1992 u aqoonsaday inay maalintani noqoto maalin lagu xuso curyaannada iyo sidii loogu howl geli lahaa in gacan lagu siiyo xuquuqdooda, sharaftooda iyo nolol wanaagsan oo ey helaan. Waxaa sidoo kale maalintan lagu xusaa sidii la isugu wacyi gelin lahaa wanaagga ay leedahay in dadyoowga curyaannada ah loo fududeeyo sidii ey bulshada qeyb uga noqon lahaayeen iyo sidii ey uga qeyb qaadan lahaayeen dhammaan dhinnacyada kala duwan ee nolosha bulshada haddey noqon lahayd siyaasadda, bulshada, dhaqaalaha, dhaqanka iyo wixii la mid ah.
Warbixin ay soo saartay laanta WHO ee QM sannadkii 2015 ayaa lagu sheegay iney 15% bulshada caalamka ku dhaqan ey leeyihiin iimaha curyaannada. Iimahaasina oo noqon kara qaar lagu dhasho, inkasta oo badankood ey soo gaaraan qofka noloshiisa. Iimaha qaarkood ayaaah kuwo muuqda halka qaarkoodna ey qarsoon yihiin.
Mahdi Deer Hamar, wuxuu in muddo ah ku dhaqnaa Sweden, gaar ahaan magaalada Trollhättan oo 45 km u jirta magaalada Göteborg. Mahdi oo u curyaamay dabadeed kolkii uu asiibay cudurka dabeeysha ee loo yaqaanno Polio ayaa sheegay inay curyaannadu faqooq ballaaran ku qabaan bulshada Soomaalida dalkii haddey noqon lahayd iyo dibaddahaba:
Mahdi Deer oo hadalkiisii sii wata ayaa sheegay in aanay naafanimadu ka macne ahayn inuu dadka kale ka liito haddey noqon lahayd dhanka kartida iyo aqoonta, hase yeeshee ey bulshada dalkan ku dhaqani uga bani’aadminimo badan yihiin faqooqii ey dadkii soomaalida ee muslinka sheeganayey ku hayeen curyaanta. Isla markaana uu weli halkiisii ka socdo.